Abjuu hamaan dubartii Kaaliforniyaa tokko qubeellaa gaa'ilaashee liqmsiise - BBC News Afaan Oromoo
Dubartiin Ameerikaa abjuudhaan qubeelaa gaa'ilaa ishee baasuun liqimsite wallansa baqaqsanii yaaluu taasifameefi.
Jeenaa Ivaansi, durbartiin ganna 29 akka jetteetti, kaadhiimaa ishee Boobii waliin ta'uun baabura saffisaa guddaan deemaa jirtu, 'namoota hamoota miidhaa geessisan' irraa oolchuuf jechan qubeellaa liqimsuuf dirqamte.
Kun hunduu abjuun akka tahe kan barte garuu ganama erga manasheetii hirribarraa kaateen booda. Ganama yeroo kaatus diraamaan keessa bulte hunduu abjuu tahuu isaafi qubeellaa gaa'iilaa kan daayimandiis qubarraa dhabde.
Waan ishee mudate hunda erga kaadhimaashee Boobiitti himteen booda gara hospitaalaa deeman.
Sana booda garuu waan jettee hakiimotatti himtu dhabdee rakkataa akka turte himte. Al takka takka boo'aa akkasumas kolfaan ture jette.
Saawud Arabiyaan dubartoonni gaggeessaa malee akka imalan hayyamte
Qorannoon carallaa [X-ray] qubeellaa kaaraatii 2.4 tahu garaa ishee keessatti agarsiise.
Image copyright Facebook Janna Evans
Kanaaf, hakiimoonni akkasumatti dhiisuun rakkoo qabaachuu danda'a jechuun waliigalan.
Haa tahu malee adeemsa hunda keessa darbitee yoo tasa lubbuun ishee darbe fedha isheen tajaajilicha argachuu ishee kan agarsiisu waliigaltee foormii dhiyaateef mallatteessuun hedduu itti ulfaatee ture.
''Yoon kan du'u ta'ee jechuun baay'een boo'e ture,'' jette. ''Qubbeellaa gaa'ilaa kana godhachuun, Boobii Howelitti heeruma jedhee yeroo dheeraa eegaan ture'' jette.
Adeemsichi milkaa'ee Ivaansi yeroo wallansa baqaqsnii yaluu ykn oppireeshinii booda dammaqxu boo'aa turte. Baa'y'een gammade, sabani isaas waan tahe yommuun ilaalu na raajeffachiisa' jette jirti.
Kaanaadaa: Dubartii xiyyaara dhaabbate keessatti qofaa hirriibaa dammaqxe
'Gaa'ila diiguun furdina garmaleef daa'imman saaxilu danda'a' jedhu qo'attoonni
Abbootiin doqdoqqee reeffaa daa'imaa fudhachuuf humnaan hospitaala seenan
Moriinoon hojiisaa Totanhaam mo'ichaan jalqabaa laata?
Mariin dhimma dubartootaa dhiira qofa hirmaachisu mormii kaase
Suuraalee mimmiidhagoo Afrikaa torban kanaa
Weerarri gifiraa lubbuu namoota 5,000 galaafate
Filannoon Booliiviyaa haaraa jeequmsaaf sababa ta'e